Baraha Bulshadu Sameyso iyo Waxyaabaha Aad Sameyso | Martech Zone
Baraha Bulshada Sameeya iyo Waxyaabaha La Qabto
Sabtida, Maarso 14, 2015 Sabtida, Maarso 14, 2015 Douglas Karr
Habeenkii kale waxaan la hadlayey suuqle kale waxaanan ka wada hadlaynay baraha bulshada, dhacdooyinka, iyo natiijooyinka. Wuxuu ii sheegayay sida uusan wali ugu arkin natiijooyinka baraha bulshada si uu uga dhigo mid qiimo leh. Si aan runta u sheego, ma dhihi karo gebi ahaanba waan diidanahay. In kasta oo astaanteyda xirfadeed iyo gaarista ganacsigeyga ay sii kordhayaan, dadka waxaa laga yaabaa inay ogaadaan in shaqsigeyga soo socda ee ku saabsan warbaahinta bulshada uu fadhiyey in muddo ah.
Daacadnimo dhan, inta badan waqtigayga aan ku qaatay baraha bulshada waxay ku jirtaa wadahadal gaar ah oo ka baxsan shabakadeyda xirfadeed. Waxaan kaqeyb qaataa maalin kasta wadahadalka xirfadleyda ah, laakiin taasi waa qeyb yar oo ka mid ah adeegsiga shaqsiyadeed.
Taasi macnaheedu maahan inuusan qiimo lahayn? Maya, dabcan maya. Anigu si firfircoon ugama macaashto dhagaystayaashayda warbaahinta bulshada sidaa darteed maahan wax aan lacag ku luminayo. Iyo, si daacadnimo ah, ma doonayo inaan marwalba ku iibiyo warbaahinta bulshada. Miyaan lacag ugaga tegayaa miiska? Waxaa laga yaabaa - laakiin tirada guud ee guud ee warbaahinta bulshada ka dib marka la barbardhigo dhagaystayaasha bartilmaameedka ah ee ila ganacsan lahaa aniga si dirqi ah ayaan iskula wareegaa.
Waxa soo socdaa ay bixiyaan waa gaadhista aan u baahanahay inaan uga faa'iidaysto qorista iyo ku hadalka fursadaha. Dadku waxay arkayaan tirooyinka waaweyn, sidaa darteed albaabbadayda iga furayaan. Markaan fursadahaas helo, waxay keenaan dakhli toos ah. Marka - mustaqbalka fog miyaan ka faa'iideysanayaa adeegsigayga warbaahinta bulshada? Waxaan u malaynayaa
Miyaan joojin doonaa firfircoonida suuqgeynta iyo ka faa'iideysiga warbaahinta bulshada? Gabi ahaanba maahan - wali waa kanaal ay dhagaystayaashaydu ka jiraan, bulsho kudarsata qiimo shaqadayda, iyo halka ay dadku ku baadhaan go'aamada iibsiga. Si fudud maahan sida ugu dhakhsaha badan or faa'iido sida kanaalada kale aniga ila yihiin. Waxaan ogaaday inaan kordhiyay saameynta warbaahinta bulshada markii aan kudarsaday suuq-geynta suuq-geynta iyo dallacsiinta in kabadan u isticmaalkeeda kanaal silo'd ah, marka taasi waa sida aan u maamulno una fulino istiraatiijiyaddeenna warbaahinta bulshada.
Shabakadaha bulshada waa goobo aad u wanaagsan oo lagu dhiirrigeliyo shaqadaada iyo ganacsigaaga - gaar ahaan kuwa macaamiisha ah ee baaraya kanaallada iyagoo adeegsanaya weedho muhiim ah, ereyo iyo ishtags - laakiin iyagu ma ahan goob lagu iibiyo adag sidaa darteed waa muhiim inaad yeelato is-dhexgal dhab ah. Waa inaad horumarisaa kalsoonida iyo fahamka macaamiisha mustaqbalka.
Dadka ku jira Caymiska Octopus waxay qabteen shaqo weyn oo halkan ah inay isku keenaan qaar hababka ugu wanaagsan ee warbaahinta bulshada Infografiggan ku saabsan qorshaynta, adeegsiga, hashtags, dhagaystayaasha iyo adeegsiga waxyaabaha ku jira. Waa talo weyn!
Tags: talo ku saabsan baraha bulshadahababka ugu wanaagsan ee warbaahinta bulshadabaraha bulshada ayaa sameeya ama ha sameyn
3 Xogta Layaabka Leh Ee Taageerta Iibinta Bulshada
Doug, oo aad u wargelin ah qoraal ahaan waxtar badan.